कोरोनाको औषधी बनेपनी विश्वको ७ अर्ब मानिसमा कसरी पुर्याउने ?
संसारभर वैज्ञानिक समूहहरू कोरोनाभाइरसविरुद्ध प्रभावकारी हुने खोपको विकास गर्न लागिपरेका छन्। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले त यसलाई ‘हाम्रो जीवनकालकै सबैभन्दा आवश्यक साझा प्रयास’ भनेका छन्। तर विश्वका सात अर्ब मानिससम्म खोप पुर्‍याउन के कस्तो व्यवस्था छ त?
यूकेमा यो प्रयासको केन्द्रमा अक्सफर्डसायरस्थित वायुसेनाको पुरानो हवाई अखाडामा रहेको ‘हार्वेल साइन्स क्याम्पस’ रहेको छ।त्यहाँ यूकेको खोप उत्पादन तथा विकास केन्द्र ‘भीएआईसी’ रहने छ। जुन निर्माण योजनालाई कोभिड-१९ कारण तीव्रता दिइएको छ। “हामीले यसको समयरेखालाई आधा छोट्टाएका छौँ।
यो खोप निर्माण केन्द्र सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा तयार हुने क्रममा थियो तर अब यो सन् २०२१ मै तयार हुने आशा छ,” त्यहाँका प्रमुख कार्यकारी म्याथ्यू डुचार्सले भने। डुचार्सले अहिलेसम्म ग्रीष्मकालको बिदा लिएका छैनन् किनभने उनलाई थाहा छ यहाँ अक्सफर्ड विश्वविद्यालयले कोरोनाभाइरस विरुद्ध बनाएको खोप उत्पादन गर्नु पर्ने हुनसक्छ।
उनी अक्सफर्डमा त्यहाँबाट नजिकै रहेको ‘जेनर इन्स्टिट्यूट’ सँग नियमित सम्पर्कमा छन्। “खोप बनेपछि प्रभावकारी रूपमा तीव्र गतिमा उत्पादन गर्नु देशका लागि मात्रै होइन, विश्वकै लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ,” उनले भने। “यस्लाई घरमा केक बनाउने प्रकृया जस्तै हो भनेर भन्न सकिन्छ।
तपाईँ घण्टौँ लगाएर मिश्रण तयार गर्नु हुन्छ र केक बनाउनु हुन्छ, तर त्यो तयार भएपछि एकैचोटी सात करोड उस्तै केक बनाउनु पर्छ। यो ठूलो चुनौती हो।” तर यो त्योभन्दा गार्‍हो काम हो। अक्सफर्ड विश्वविद्यालयले तयार पारेको खोपको मानव परीक्षण अफ्रिकामा भइरहेको छ ।
अक्सफर्ड विश्वविद्यालयले खोप परीक्षणको नतिजा आउनुभन्दा पहिल्यै खोप उत्पादन गर्न प्रयोगशालाका लागि आवश्यक ठाउँ लिइसकेको छ। मानवमा प्रयोगका लागि कोभिड-१९ का अर्बौँ खोपहरू बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। ती सबै उत्पादन र वितरणका साथै विश्वभर मानिसहरूलाई लगाउने कार्य पनि गर्नुपर्छ। बीबीसी बाट
Prevकुखुरको मासुमा पनि देखियो कोरोना: अब के होला ? (आर्यात गरिएको मासु नखाउँ)
Nextअब भारतको भर पर्नु नपर्ने: केरुङ्गबाट काठमाडौंसम्म पेट्रोलियमको पाइपलाईन बिच्छ्याइँने